တနကေုနျ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျစီးတဲ့အခါ ခွထေောကျကို သကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား – One Daily Media
တနကေုနျ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျစီးတဲ့အခါ ခွထေောကျကို သကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား
သှားစရာ မင်ျဂလာဆောငျတှေ၊ ပှဲတှကေ ပေါမြားလာပါပွီ ။ ပှဲတကျတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖွဈစမေယျ့ အဝတျအစားတှေ၊ ဒေါကျဖိနပျတှေ လိုအပျလာပါတယျ။ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှကေ စီးလိုကျရငျ လှပမေယျ့ ညဘကျရောကျရငျတော့ ခွထေောကျ နာလာပါတယျ။ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှကွေောငျ့ ခွထေောကျနာတာကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှေ ရှိနပေါပွီ။
1. ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျကို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ထားခွငျး
ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှကေို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ မိနဈ 30 လောကျထားပါ။ အေးနတေဲ့ဖိနပျကို စီးလိုကျတဲ့အခါ ခွထေောကျရဲ့အနှေး ဓာတျနဲ့ ဖိနပျ အသားကြ သှားမှာပါ။ ဖိနပျထဲကို ရခေဲရေ ထညျ့ထားလို့လညျး ရပါတယျ။ ရခေဲရကေ ဖိနပျကို အနညျးငယျ ကယျြလာစပေါတယျ။
ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှေ စီးမယျဆိုရငျ ခွအေိတျနဲ့ တှဲပွီးစီးခွငျးက ဖိနပျကို ပိုကယျြသှားစပွေီး သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈစပေါတယျ။
3. နှဈဖကျတိပျ ကပျခွငျး
ဖိနပျခုံပျေါမှာ နှဈဖကျတိပျကို ကပျလိုကျပါ။ အဲဒီလို ကပျခွငျးက ခွထေောကျမှာ ရကွေညျဖုပေါကျတာတှေ၊ ခွခြေောငျးနာတာတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။
4. ဆီလီကှနျအပွားမြား သုံးခွငျး
ဆီလီကှနျအပွားတှကေ ခွခြေျောတာတှေ၊ ရကွေညျဖု ပေါကျတာတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။
5. ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျ လိမျးခွငျး
ဖိနပျအသဈဆိုရငျ ဒေါကျဖိနပျမစီးခငျမှာ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျကို လိမျးပေးပါ။ ခွထေောကျပေါကျခွငျး၊ ပှနျးခွငျး၊ နာကငျြခွငျးဆှေ သကျသာသှားမှာပါ။
ကလေးပေါငျဒါကို ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျပျေါမှာ ဖွူးပေးရငျ ခွဆေီထှကျပွီး ခွခြေျောတာတှေ မဖွဈတော့ပါဘူး။
7. ခွခြေောငျးလေးတှကေို တိပျဖွငျ့ကပျခွငျး
ခွညှေိုးနဲ့ ခွခေလယျကို ပူးပွီး တိပျနဲ့ကပျလိုကျရကျ အဲဒီခွနှေဈခြောငျးကွားက ဖိအားတှေ လြော့သှားပွီး ခွထေောကျ မနာတော့ပါဘူး။
8. ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျကို မခြှတျပါနဲ့။
ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျ စီးရတာ အဆငျမပွလေို့ ခြှတျထားရငျ ခဏတော့ သကျသာမှာပါ။ ပွနျစီးတဲ့အခါ ခွထေောကျက ပိုပွီးနာတတျပါတယျ။
9. အိမျမှာ ဒေါကျဖိနပျ စီးကငျြ့ပါ။
ပှဲတှသှေားခါနီး တဈပတျ အလိုလောကျဆိုရငျ အိမျမှာ ဒေါကျဖိနပျ စီးကငျြ့ပါ။ ဖိနပျအသဈ ဆိုရငျကယျြလာပွီး ဖိနပျစီးရတာလညျး အဆငျပွသှေားမှာပါ။
10. ခြှေးနံ့ပြောကျဆေးကို သုံးပါ။
ဒေါကျဖိနပျ မစီးခငျမှာ ခွထေောကျကို ခြှေးနံ့ပြောကျဆေး လိမျးပေးပါ။ အဲဒီအခါ ခွထေောကျနဲ့ဖိနပျ ပှတျတိုကျမှု နညျးသှားပွီး စီးရတာ အဆငျပွမှောပါ။
11. ဒေါကျဖိနပျစီးရတာ ညောငျးရငျ ထိုငျခလြိုကျပါ။
ဒေါကျဖိနပျစီးပွီး လမျးလြှောကျရတာ အခြိနျကွာလာရငျ တဈနရောမှာ ထိုငျခလြိုကျပါ။ မတျတပျရပျနခွေငျးက ခွထေောကျကို ပိုနာစပေါတယျ။
12. ခွထေောကျကို ဂရုစိုကျပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ခွဖေနောငျ့ကှဲရငျ၊ အသားအရကွေမျးရငျ၊ ခွထေောကျ အသားမာတကျရငျ ဒေါကျဖိနပျ စီးတဲ့အခါ ပိုပွီး နာကငျြမှာပါ။ ခွထေောကျကို အရငျဂရုစိုကျပွီးမှ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျစီးပါ။
13. ဒေါကျအရမျးမွငျ့တဲ့ ဖိနပျကို မရှေးပါနဲ့။
ဒေါကျအရမျးမွငျ့တဲ့ ဖိနပျတှကေ ခွထေောကျကိုသာမက အာရုံကွောကိုပါ ထိခိုကျစပေါတယျ။ လကျမ အနညျးငယျမွငျ့တဲ့ ဖိနပျက ကွညျ့လို့လှပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး သငျ့တျောပါတယျ။
ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျကို အမွဲ စီးနကေသြူဆိုရငျ လကျကိုငျအိတျထဲမှာ အနာကပျပလာစတာကို ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။ ခွထေောကျပေါကျတဲ့အခါ အရေးပျေါသုံးလို့ရလို့ အဆငျပွစေမှောပါ။
တနေကုန် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ ခြေထောက်ကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
သွားစရာ မင်္ဂလာဆောင်တွေ၊ ပွဲတွေက ပေါများလာပါပြီ ။ ပွဲတက်တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားတွေ၊ ဒေါက်ဖိနပ်တွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေက စီးလိုက်ရင် လှပေမယ့် ညဘက်ရောက်ရင်တော့ ခြေထောက် နာလာပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကြောင့် ခြေထောက်နာတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပါပြီ။
1. ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားခြင်း
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မိနစ် 30 လောက်ထားပါ။ အေးနေတဲ့ဖိနပ်ကို စီးလိုက်တဲ့အခါ ခြေထောက်ရဲ့အနွေး ဓာတ်နဲ့ ဖိနပ် အသားကျသွားမှာပါ။ ဖိနပ်ထဲကို ရေခဲရေ ထည့်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ ရေခဲရေက ဖိနပ်ကို အနည်းငယ် ကျယ်လာစေပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေ စီးမယ်ဆိုရင် ခြေအိတ်နဲ့ တွဲပြီးစီးခြင်းက ဖိနပ်ကို ပိုကျယ်သွားစေပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။
3. နှစ်ဖက်တိပ် ကပ်ခြင်း
ဖိနပ်ခုံပေါ်မှာ နှစ်ဖက်တိပ်ကို ကပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီလို ကပ်ခြင်းက ခြေထောက်မှာ ရေကြည်ဖုပေါက်တာတွေ၊ ခြေချောင်းနာတာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
4. ဆီလီကွန်အပြားများ သုံးခြင်း
ဆီလီကွန်အပြားတွေက ခြေချော်တာတွေ၊ ရေကြည်ဖု ပေါက်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
5. ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ် လိမ်းခြင်း
ဖိနပ်အသစ်ဆိုရင် ဒေါက်ဖိနပ်မစီးခင်မှာ ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်ကို လိမ်းပေးပါ။ ခြေထောက်ပေါက်ခြင်း၊ပွန်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းဆွေ သက်သာသွားမှာပါ။
ကလေးပေါင်ဒါကို ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ပေါ်မှာ ဖြူးပေးရင် ခြေဆီထွက်ပြီးခြေချော်တာတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ခြေညှိုးနဲ့ခြေခလယ်ကို ပူးပြီး တိပ်နဲ့ကပ်လိုက်ရက် အဲဒီခြေနှစ်ချောင်းကြားက ဖိအားတွေ လျော့သွားပြီး ခြေထောက် မနာတော့ပါဘူး။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စီးရတာ အဆင်မပြေလို့ ချွတ်ထားရင် ခဏတော့ သက်သာမှာပါ။ ပြန်စီးတဲ့အခါ ခြေထောက်က ပိုပြီးနာတတ်ပါတယ်။
9.အိမ်မှာ ဒေါက်ဖိနပ် စီးကျင့်ပါ။
ပွဲတွေသွားခါနီး တစ်ပတ် အလိုလောက်ဆိုရင် အိမ်မှာ ဒေါက်ဖိနပ် စီးကျင့်ပါ။ ဖိနပ်အသစ် ဆိုရင်ကျယ်လာပြီး ဖိနပ်စီးရတာလည်း အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
10. ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးကို သုံးပါ။
ဒေါက်ဖိနပ် မစီးခင်မှာ ခြေထောက်ကို ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီအခါ ခြေထောက်နဲ့ဖိနပ် ပွတ်တိုက်မှု နည်းသွားပြီး စီးရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။
11. ဒေါက်ဖိနပ်စီးရတာ ညောင်းရင် ထိုင်ချလိုက်ပါ။
ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းလျှောက်ရတာ အချိန်ကြာလာရင် တစ်နေရာမှာ ထိုင်ချလိုက်ပါ။ မတ်တပ်ရပ်နေခြင်းက ခြေထောက်ကို ပိုနာစေပါတယ်။
12. ခြေထောက်ကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ခြေဖနောင့်ကွဲရင်၊ အသားအရေကြမ်းရင်၊ ခြေထောက် အသားမာတက်ရင် ဒေါက်ဖိနပ် စီးတဲ့အခါ ပိုပြီး နာကျင်မှာပါ။ ခြေထောက်ကို အရင်ဂရုစိုက်ပြီးမှ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးပါ။
13. ဒေါက်အရမ်းမြင့်တဲ့ ဖိနပ်ကို မရွေးပါနဲ့။
ဒေါက်အရမ်းမြင့်တဲ့ ဖိနပ်တွေက ခြေထောက်ကိုသာမက အာရုံကြောကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။ လက်မ အနည်းငယ်မြင့်တဲ့ ဖိနပ်က ကြည့်လို့လှပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို အမြဲ စီးနေကျသူဆိုရင် လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ အနာကပ်ပလာစတာကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ခြေထောက်ပေါက်တဲ့အခါ အရေးပေါ်သုံးလို့ရလို့ အဆင်ပြေစေမှာပါ။